Ukupheka ibhlog kunye neendlela zokupheka ezimnandi
Ungakwazi ukukhenkceza ikhaphetshu ebomvu emva kokuba iphekiwe?
Udidi: Enye i-coocing 0
Ngaba ndingayikhephezela ikhaphetshu ebomvu xa iphekiwe? Ikhaphetshu ebomvu kufuneka iphekwe imizuzu eyi-15-20 ngaphezulu ukuba ayiculwanga kakuhle. Esi sidlo sibanda kakuhle. Vumela i...
Umbuzo wakho: Uyipheka njani isoseji ngaphandle kokwaphula i-casing?
Uzipheka njani iisoseji ngaphandle kokuzigqabhuza? Nokuba uyasasa okanye iisoseji zegrill, qiniseka ukuba uzijike rhoqo ukuze uzifudumeze kwaye unqande ukugqabhuka…
Yintoni onokuyisebenzisa endaweni yeoli ekuphekeni?
Yintoni ongayisebenzisa endaweni yeoli? Oku kulandelayo kunokutshintshwa ikomityi kwikomityi ye-oyile yemifuno kwizinto ezibhakiweyo: I-apilesauce, kukhethwa ukuba i-unsweetened. Ibhanana, ivuthiwe kwaye icudiwe….
Ingaba iinoodles ziyadada xa ziphekiwe?
Wazi Njani Xa ii-noodles ziphekiwe? Ekuphela kwendlela yokwazi ukuba yenziwe kukungcamla! Ifanele ibe yial dente, okanye iqine uku...
Ngaba kulungile ukupheka amaqanda kwi-bacon grease?
Ngaba kunempilo ukuqhotsa amaqanda kwi-bacon grease? UTomaino uqaphela ukuba ayisiyobhotolo kuphela ekufuneka uyilumkele: ioyile yekhokhonathi kunye negrisi yebhakoni zi...
Ndipheka njani i-roast kwi-BBQ?
Ngaba iTyson Chicken Nuggets iphekwe ngokupheleleyo? Uyipheka njani irosti kwi-BBQ enehood? Ukupheka inyama yenkomo eyojiweyo ngeBBQ enehood Shise ibarbecue kwasekuqaleni...
Wazi njani xa kuphekwa ibhega?
Loluphi uhlobo lwemifuno onokulupheka? Wazi njani ukuba ibhega iphekwe ngokupheleleyo? Ukubona ukuba ibhega yakho ilungile, vele uphose...
Uyenza njani ibhekoni ephekiweyo?
Ndiyipheka njani ibhekoni ephekwe kwangaphambili? Ekubeni ibhakoni iphekwe ngokupheleleyo, konke okufuneka ukwenze kukutshisa kwi-microwave kwi-HIGH malunga ne-5 ...
Ngaba ukutya kwaselwandle okuphekiweyo kungagcinwa ubusuku bonke?
Ngaba ukutya kwaselwandle kuhamba kakubi ngobusuku nje? Ukuba ukufudumeza kwakhona ukutya obekulityalwe kwikhawuntara ubusuku bonke okanye bekushiywe ngaphandle imini yonke, kukhuselekile ukukutya?…
Ufanele uxinzeleleke ukupheka ixesha elingakanani?
Ngaba unokucinezela ukupheka ixesha elide? Ngelishwa, xa sele ugqithise iqhekeza lenyama kwi-cooker yoxinzelelo, akukho kubuya ngasemva. Uzakushiyeka nengqumba...
1 2 ... 6,569 Okulandelayo
Ndiyabulisa! Igama lam ndinguKate kwaye ndiyakuthanda ukupheka. Ndabelana nabafundi bam zokupheka ezimnandi kunye neehaki zobomi ezinomdla ezivela kwilizwe lokupheka.
Ubuze: Ngaba ndingabhaka ipayi kwi-oveni yokuhambisa?
Umbuzo oxhaphakileyo: Kutheni le nto ii-turkeys ezibandayo ziqhuma xa zithosiwe?
Umbuzo: Yintoni eyenza isidlo esipheleleyo?
Ndingacoca ntoni ngomgubo wokubhaka?
Ngaba ungabilisa iimbambo ezibandayo?
Zithini iives kwi-grill?
Uthambisa njani ishrimps ephekiweyo?
© 2022 Masitye?
UKUQWALASELWA KWABASEBENZI ABALUNGILEYO! Zonke izinto zithunyelwe kwisiza ngokungqongqo ukulungiselela ulwazi kunye nemfundo! Ukuba ucinga ukuba ukuthunyelwa kwayo nayiphi na into kunyhasha ilungelo lakho lokushicilela, qiniseka ukuba unxibelelana nathi kwifom yoqhakamshelwano kwaye nezinto zakho ziya kususwa!